Vaovao - Inona no mitranga amin'ny famandrihana wireless Wireless iPhone12 MagSafe
Hatramin'ny iPhone 8 tamin'ny 2017 dia nampidirin'i Apple ny lahasa fiasa tsy misy tariby amin'ny maodely iPhone rehetra, izay mitovy amin'ny fomba famahana finday hafa amin'ny finday hafa, ary manomboka mamaly izy rehefa apetraka amin'ny charger tsy misy tariby. Apple dia manantena ny amin'ny fiasan'ny tariby tsy misy tariby, saingy nilaza mazava izy fa ny famindrana tsy misy tariby dia miankina amin'ny fampifanarahana ny coil transmitter sy ny coil an'ny mpandray. Tsy afaka hahatratra ny vokatra tsara indrindra ny charger tsy misy tariby nentim-paharazana rehefa apetraka an-tanana. Raha diso ny fametrahana azy ireo dia hihena ny fahombiazan'ny famahanana tsy misy tariby ary tsy hitombo ny herinaratra. , Fampandehanana miadana, fanafanana mahery vaika, sns., Manakana ny fivoaran'ny famahanana tsy misy tariby ary mitondra traikefa ratsy.
Manomboka amin'ny fotony, Apple dia nanolotra ny teknolojia famandrihana MagSafe vaovao hamoahana ny traikefa ratsy amin'ny famahana finday nentim-paharazana. Ny telefaona finday iPhone 12, kojakoja peripheral ary charger dia miaraka amina singa Magnetika Magnetika mba hahatratrarana ny vokatry ny fametrahana sy ny fampifanarahana mandeha ho azy. iPhone 12, na ny iPhone12 mini na ny iPhone12 Pro dia samy manana ny haitao magnetafe vaovao famakiana andriamby.
Araka ny hita amin'ny fomba fijerin'ny iPhone12, rafitra rafitra rafitra famonoana MagSafe rafitra, coil mihodina tsy manam-paharoa mahazaka fahefana mandray bebe kokoa, misambotra ny fiakatry ny andriamby amin'ny alàlan'ny tontonana nanocrystalline, ary mandray sosona ampinga nohatsaraina mba hahazoana Recharge haingana tsy misy tariby. Misy andiana andriamby matevina dia ampidirina ao amin'ny sisin'ny coil mpandray tsy misy tariby mba hahatsapany ny fampifanarahana mandeha ho azy sy ny fifampikasohana amina kojakoja andriamby hafa, amin'izay hanatsarana ny fahombiazan'ny fahazoana tariby. Miaraka amin'ny magnetometera marefo avo lenta, mamaly avy hatrany ny fanovana ny tanjaky ny sahan'andriamby, mamela ny iPhone12 hamantatra haingana ireo kojakoja andriamby ary hiomana amin'ny famandrihana tsy misy tariby.
Koa satria ny iPhone 8 dia manana fiampangana tsy misy tariby 7.5W, ny herin'ny famahanana tsy misy tariby an'ireo iPhones teo aloha dia nijanona tamin'ny 7.5W. Ny teknolojia famandrihana MagSafe dia manatsara ny fahombiazan'ny famandrihana tsy misy tariby, miaraka amin'ny herin'ny 15W ambony indrindra.
Ankoatry ny famandrihana MagSafe Magnetic, ny andiany iPhone12 iray manontolo dia mbola manohana ny famandrihana tsy misy tariby Qi miaraka amina fahaiza-manao marobe, miaraka amin'ny herin'ny hatramin'ny 7.5W. Ireo mpampiasa mila hafainganam-pandeha haingam-pandeha haingana dia afaka mampiasa ny charger MagSafe tany am-boalohany, ary ny charger tsy misy tariby Qi izay miparitaka be eny an-tsena dia azo ampiasaina hatrany.